दुईवटा विवाह नगर्ने पुरुष जेल जानुपर्ने, श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्न रोक्ने महिलालाई पनि सजाय ! – Khabar28media
दुईवटा विवाह नगर्ने पुरुष जेल जानुपर्ने, श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्न रोक्ने महिलालाई पनि सजाय !
June 6, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
दुईवटा विवाह नगर्ने पुरुष जेल जानुपर्ने, श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्न रोक्ने महिलालाई सजाय हुनसक्ने ! हाम्रो देशमा बहुविवाह कानूनतः प्रतिबन्धित छ र एकभन्दा धेरै श्रीमती बनाउने पुरुषलाई सजाय पनि हुन्छ । तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा दुईजना महिलासँग विवाह नगरे सजाय मिल्ने कानून रहेको छ । इरिट्रियामा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसंख्या निकै कम छ ।
सोही कारण सरकारले सबै पुरुषलाई दुईजना महिलासँग विवाह गर्नैपर्ने कानून बनाएको हो। कुनै पनि महिला अविवाहित बस्नु नपरोस् भन्ने मनशायले सरको यस प्रकारको अनौठो कानूनको निर्माण गरेको हो। कानूनको उल्लंघन गरी दुईवटा विवाह नगर्ने पुरुषलाई जेलको सजाय हुन्छ । पुरुषलाई मात्र सजाय हुने होइन, महिलालाई पनि यदि पहिलो श्रीमतीको रुपमा विवाह गरेर भित्रिएका कुनैपनि महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता महिलालाई पनि सजाय हुने कुरा कानूनमा उल्लेख छ ।
कुनैपनि महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेमा त्यस्ता महिलालाई पनि सजाय हुने कुरा कानूनमा उल्लेख छ । श्रीमानलाई दोश्रो विवाह गर्नबाट रोक्ने महिलालाई जन्मकैदको सजाय हुनसक्ने प्रावधान कानूनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्याममा उल्लेख छ । इरिट्रियामा हरेक पुरुषले कम्तीमा २ जना महिलासँग विवाह गर्नैपर्दछ इरिट्रियामा हरेक पुरुषले कम्तीमा २ जना महिलासँग विवाह गर्नैपर्दछ । एजेन्सीको सहयोगमा
युके लाहुरेको सपना बोकेर दौडनेलाई यो कुरा थाहा छ? जानि राख्नुहोस्
स्विमिङ पूलमा रमाएकी प्रियंकाको तस्वीरले आलोचना र प्रशंसा दुबै पाइरहेका छन् । हेर्नुहोस भिडियो सहित
Previous Article राशिफल: वि.सं. २०७८ ज्येष्ठ २४ गते सोमबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
Next Article Breaking:- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यस्तो अध्यादेश जारी, अटेर गर्नेलाई कडा सजाय दिइने !!